I-Honor Magic Watch 2, ibhethri, intengo enhle nokunye okuningi | Izindaba zamagajethi
IHonor yethula iMagic Watch 2
URafa Rodríguez Ballesteros | | Gadgets, SmartWatch
INhlonipho yethule inguqulo entsha ye-smartwatch sayo. Siyayazi i- Hlonipha Umlingo Wokubuka 2 okuzayo ilayishwe izindaba. Abanye bathanda i- ukubuyekeza design zisobala. Futhi ezinye izici, noma singeke sizibone ngamehlo, zenza le nguqulo entsha ibe ngcono kakhulu kunale yokuqala.
Esinye sezici ezivelele kakhulu yi- ukuzimela okukhulu ekwazi ukunikela ngebhethri layo. Kuze kube amasonto ama-2 wokusetshenziswa okungaphazanyiswa asikho isidingo sokukhokhisa ngobukhulu bamamodeli. Ezinye izinombolo ezikubeka phakathi kwama-smartwatches anokuzimela okukhulu emakethe yamanje.
1 I-Honor Magic Watch 2, ibhethri amasonto amabili
2 I-Honor Magic Watch 2, intengo enhle nokunye okuningi
I-Honor Magic Watch 2, ibhethri amasonto amabili
Yize njengoba sisho, isikhathi sebhethri laso besingelinye lamaphoyinti ashaqisayo, iMagic Watch 2 nayo igqame nezinye izici. Isihluthulelo sokuzuza ukuzimela ngale ndlela ukuthi ube uhlelo lokusebenza olusebenze ngokukhululekile ukugcina ukusebenza kwakho kugeleza nje.
Iprosesa ekhethiwe ngoba le Magic Watch entsha yi- I-Kirin A1. Iprosesa evelele cishe lutho. Kepha okube khona yakhelwe kuphela amadivayisi alolu hlobo futhi lokho kufeza ukuthunywa kwayo nge solvency ephelele enikeza umuzwa womsebenzisi okhangayo kakhulu.
Siyathola izinguqulo ezimbili ngosayizi abahlukene, futhi nokuxazululwa okuhlukile. Isikrini esingu-42mm esinesixazululo se-pixel esingu-390 x 390, kanye nesikrini se- 46 mm, ngesinqumo se- Amaphikseli we-454 x 454. Mayelana nokwakheka, kule nguqulo entsha yeMagic Watch, a isitayela esihle kakhulu nesicwengekile. Noma ngaphandle kokuyeka izinzuzo ezihloselwe ukusetshenziswa kwezemidlalo isebenziseka kakhulu.
I-Honor Magic Watch 2, intengo enhle nokunye okuningi
Kuzofanele silinde kuze kube maphakathi noDisemba ukuze sithole i-Honor entsha egqokekayo. Kepha sesivele sazi amanani ukuthi kuzofanele sikhokhele uhlobo ngalunye lwayo. Uhlobo oluncane kakhulu, 42mm izobiza cishe ama-euro angu-179, futhi inguqulo enkulu, 46mm, I-189 euro. Amanani abonakala enengqondo ngokubheka izici nokuklama asinikeza khona.
Sizokuba nokungeziwe kulokhu esesikutshele khona, ukushaya kwenhliziyo kanye nenzwa ye-atrial fibrillation. Ukuxhumana I-Bluetooth 5.1, imakrofoni eyakhelwe ngaphakathi nesipikha, i-dual-frequency GPS, ukumelana kwamanzi kanye ne-multi-function NFC. Njengoba singaboni lutho oluphuthelwe. Ngaphandle kokungabaza, i-Honor ibheja ngokuqinile ngedivayisi ephelele kakhulu elungele ukuthola indawo yayo kulo mkhakha. Isipho sikaKhisimusi obukade usifuna?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » IHonor yethula iMagic Watch 2
Izipesheli ezihamba phambili ekhaya nge-Black Friday
I-Tone Ultra ne-Tone Active +, lolu uhla lwe-LG lwama-headphone angahlehlekayo